(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ - MM Live News
May 1, 2019 MM Live News
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ် ၁၀၀၀ တန် သိန်းတစ်သောင်းခွဲ အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် တိုက်ရန် ( စ/ဆုံး ) အပြည့်အစုံ
(၃)ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း ငါးထောင် အထူးဆုကြီး
သိန်း ၁၅၀၀၀ ကခ ၅၈၅၀၂၄ မိုးယံ(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ
(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ငါးထောင် ဆုကြီးများ
သိန်း ၅၀၀၀ ဎ ၈၃၄၁၄၇ မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀၀ ဗ ၆၂၆၂၈၆ မိုးယံ
(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင် ဆုကြီးများ
(၃)ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် ဆုကြီးများ
(၃) ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀၀ ဆုမဲများ
သိန်း ၅၀၀ ယ ၂၃၉၃၈၁
သိန်း ၅၀၀ န ၃၅၇၈၆၈
သိန်း ၅၀၀ ဠ ၃၀၂၉၅၁
သိန်း ၅၀၀ ဗ ၁၃၉၈၂၄ မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀ ထ ၇၄၅၉၁၃ မိုးယံ
သိန်း ၅၀၀ ည ၁၅၆၀၆၁
သိန်း ၅၀၀ ခ ၇၁၅၀၀၄
သိန်း ၅၀၀ ဒ ၉၄၀၄၁၃ မိုးယံ
(၃) ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၂၀၀ ဆုမဲများ
သိန်း ၂၀၀ ယ ၂၅၃၃၀၈ မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀ ရ ၂၄၂၂၅၆
သိန်း ၂၀၀ ယ ၂၂၃၅၉၃ မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀ အ ၃၄၈၅၀၁ မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀ ကခ ၈၂၉၂၂၉
သိန်း ၂၀၀ အ ၇၁၀၃၁၂
သိန်း ၂၀၀ စ ၉၈၃၀၂၂ မိုးယံ
သိန်း ၂၀၀ ဍ ၈၆၁၃၅၀
သိန်း ၂၀၀ ကဃ ၃၃၈၈၈၇
သိန်း ၂၀၀ င ၈၃၅၆၆၃
(၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ဆုမဲများ
သိန်း ၁၀၀ ကဃ ၃၂၃၆၂၀ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ မ ၃၂၈၃၄၇ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ ည ၃၅၃၇၁၀
သိန်း ၁၀၀ ရ ၁၄၈၁၂၂ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ ကဂ ၉၉၇၇၆၆ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ တ ၅၁၆၅၄၃ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ ခ ၆၈၄၂၄၉
သိန်း ၁၀၀ လ ၅၆၃၃၄၇ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ ဂ ၃၉၃၅၁၀
သိန်း ၁၀၀ မ ၉၁၈၈၆၈ မိုးယံ
သိန်း ၁၀၀ ည ၈၇၇၂၃၇
သိန်း ၁၀၀ ကဃ ၇၄၁၅၅၅
(၃) ကြိမ်မြောက်ကျပ်သိန်း ၅၀ ဆုမဲများ
သိန်း ၅၀ အ ၇၄၆၀၂၁ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ က ၂၅၂၆၂၀
သိန်း ၅၀ ဒ ၉၃၄၅၇၁ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ မ ၉၄၁၀၄၅ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ဟ ၃၁၂၇၉၆
သိန်း ၅၀ န ၅၅၅၇၅၇ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ သ ၁၅၇၀၉၄
သိန်း ၅၀ ဎ ၆၇၀၄၀၉ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ဟ ၈၁၂၂၆၄ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ဒ ၇၁၈၉၃၉ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ပ ၇၃၆၁၂၉ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ရ ၈၂၉၄၂၀
သိန်း ၅၀ မ ၂၈၃၄၆၇ မိုးယံ
သိန်း ၅၀ ဟ ၇၃၆၀၄၁
သိန်း ၅၀ ည ၂၀၅၀၈၃ မိုးယံ
(၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်း ၂၀ ဆုမဲများ
သိန်း ၂၀ မ ၆၅၇၄၇၅
သိန်း ၂၀ ဋ ၅၃၇၆၆၈
သိန်း ၂၀ ည ၈၈၂၆၀၉
သိန်း ၂၀ ဂ ၂၀၈၀၀၀
သိန်း ၂၀ ဈ ၁၄၂၄၃၀
သိန်း ၂၀ ထ ၆၉၀၄၄၉ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ဟ ၈၄၂၉၅၇ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ဗ ၁၄၂၀၀၃
သိန်း ၂၀ ဓ ၆၅၉၅၉၃
သိန်း ၂၀ ဍ ၉၆၂၀၇၀ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ခ ၄၇၁၉၄၃ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ တ ၆၉၁၉၅၁
သိန်း ၂၀ ကက ၅၄၂၃၉၁ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ဘ ၄၀၃၇၃၀ မိုးယံ
သိန်း ၂၀ ထ ၂၉၂၀၁၄ မိုးယံ
(၃) ကြိမ်မြောက် ကျပ်၁၀သိန်း ဆုမဲများ
၁၀ သိန်း ထ ၇၂၉၈၀၇
၁၀ သိန်း ဟ ၂၇၁၈၇၀
၁၀ သိန်း ယ ၆၆၄၉၇၇
၁၀ သိန်း ဋ ၄၁၇၂၂၀
၁၀ သိန်း ဆ ၇၀၅၉၀၄ မိုးယံ
၃ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀တန် ထီပေါက်စဉ်(5)သိန်း
ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသေးပါ ကျန်ရှိ ဆုမဲများကို ဆက်လျှက်တင်ပေးနေပါမည်
(၃) ကြိမ်မြောက် ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ် ကျပ် ၅ သိန်းဆုများ
(၃) ကြိမ်မြောက် ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၃ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၅ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )
(၃) ကြိမ်မြောက် ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၂ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၄ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )
(၃) ကြိမ်မြောက် ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၁ သိန်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၃ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )
(၃) ကြိမ်မြောက် ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ ကျပ် ၅ သောင်းဆုများ ( အက္ခရာနှင့် ရှေ့ဂဏန်း ၂ လုံး အစဉ်လိုက်တူ )
ထီတိုက်ကြပါနော် ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာ သိန်းခြောက်သောင်းမထုတ်ပါ
အများနစ်နာမှုမရှိအောင် like&share ထီပေါက်စဉ်ပေါင်းချုပ်ဖြင့်ပြန်တိုက်ပါ
ထီတိုက်ရတာ အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်….နောက်လ တွေလည်း အခုလိုပဲ အ လွယ် တကူ ထီတိုက်လို့ ရ အောင် ဒီ Page လေးမှာ တင်ပေးသွားပါ့မယ်ခင်ဗျ :D…..ကျေးဇူးပြုပြီး Page ကို လိုက်ခ် လုပ်ပြီး SeeFirst လုပ်ထားဖို့ လုံးဝမမေ့ပါနဲ့နော်
ထီပေါက် ချင်သူများအတွက် ….
တစ်သက်လုံး ထီ တစ်ခါမှမပေါက်ဖူးဘူးလို့ ပြောနေသူတွေ၊ ထီ တော့ ပေါက်ဖူးချင်တယ်လို့ ပြောနေသူတွေ ၊ထိုးသာထိုးနေရတယ် ပေါက်လည်းမပေါက်ဘူး လို့ ပြောနေသူတွေအတွက် ထီ ထိုးနည်းလေးတစ်ခု အကြံပေးချင်ပါတယ်။
လက်ရှိ အောင်ဘာလေ ထီဆုမဲ စနစ်မှာဝေဝေဆာဆာပဒေသာဆုမဲ စနစ်ပါရှိနေတဲ့အတွက် မပေါက်မရှိ ထီထိုး နည်းရှိပါတယ်။ ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာ စနစ်အရ အက္ခရာ နဲ့ရှေ့ဂဏန်းနှစ်လုံးတူရင် ငါးသောင်းဆု ပေါက်တဲ့အတွက် ထီထိုး မယ်ဆိုရင် ရှေ့ဂဏန်းကို၁၀,၁၁ , ၁၂…..ကနေ ၉၉…..ထိပါတဲ့ ( အရင်က မင်္ဂလာစုံတွဲခေါ်တဲ့ မင်္ဂလာ စုံတွဲ ထီ) မင်္ဂလာ စုံတွဲ အတွဲ( ၉၀ ) ဝယ်ထိုးရင် မပေါက်မရှိပါဘဲ။
ထီ လက်ကား ဆိုင် တွေမှာ သွားဝယ်ရင်မင်္ဂလာ စုံတွဲ တစ်တွဲ( အစောင်လေးဆယ် )ကို ရှစ်ထောင်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။အတွဲ ၉၀ဆိုတော့ ၇၂၀၀၀၀ကျပ်တော့ ရင်းရမှာပေါ့။
လက်ရှိဆုမဲစနစ်အရ အဲ့ဒီ့ အတွဲ ၉၀ ထဲက ငါးသောင်းဆု သုံးဆုကျိန်းသေပေါက်ပါမယ်။ကိုယ့်ကံထူးရင် ထူးသလိုထီဆုကြီးတွေလည်း ပေါက်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ထီထိုး ရင်ပေါက်ချင်သူများ၊တစ်သက်မှာတစ်ခါတော့ ထီပေါက် ချင်သူများ ကျနော်ပြောခဲ့တဲ့နည်းအတိုင်း ထီထိုးကြပါလို့ အကြံပေးအပ်ပါတယ်။
၇၂၀၀၀၀ကျပ် ရင်းပြီး အနည်းဆုံးတစ်သိန်းခွဲပြန်ရမယ်၊ကံကောင်းရင် ဆုကြီး ပေါက်မယ်ဆိုတော့ ရင်းသင့်တယ်ထင်ပါတယ်…,,,,
ထီဆိုင် တွေမှာ အဲ့လိုမျိုးတွေတွဲပြီးရောင်းကြတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။သူတို့ဆိုင်တွေရဲ့အခေါ်တွေကတော့အမျိုးမျိုးပါပဲ…တစ်ချို့က အင်တာနက်ထီ တဲ့။တစ်ချို့က ကွန်ပျူတာ ထီ တဲ့။တစ်ချို့က ပေါ်ပြူလာထီ တဲ့။တစ်ချို့က ပေါက်မလွဲထီ တဲ့။တစ်ချို့က အင်ထရာနက်ထီ တဲ့။တစ်ချို့က ………………… တဲ့……
ကဲ…. မပေါက်မရှိ ထီထိုး နည်းတော့ပေးလိုက်ပါပြီ။အရင်းအနှီးမပြည့်စုံကြရင်လည်းစုပေါင်းစပ်ပေါင်းလေးတော့ထိုးကြည့်ကြပေါ့လေ……..
Tagged ၁၀၀၀ တန်
တစ်ကျွန်းကျသူ ဦးဆောင်၍ ထောင်ဖောက် ထွက်ပြေးမှု ၁၄ ဦး ပြန်လည်ဖမ်းမိ
September 17, 2018 MM Live News
ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ဝိဉာဉ်ထွက်သွားပုံကို CCTV က မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့
အမျိုးသမီး တစ်ဦးကို ဓမ္မတာနဲ့ဆန့်ကျင်​​ပြီး အဓမ္မပြုကျင့်သူ